DORO TANETY – 2424.mg
dans À la une, Actualité, Opinions, Social
Atsaharo ny doro tanety ! Aza avela ho lavenina ny Nosy malalantsika ! Zarao amin’ny namanao ! Manomboka eny amin’ny fokontany ka hatrany amin’ny governemanta, na ho an’ny filoham-pirenena voafidy manaraka eo : raiso ny andraikitrareo.
Atsaharo ny doro tanety!